Ny Tantara Lava Mikasika ny Nosy Grika Iray Nanafoana Vonjimaika ny ‘Adin’ny Bala Afomanga’ Rehefa Paska · Global Voices teny Malagasy
Ny Tantara Lava Mikasika ny Nosy Grika Iray Nanafoana Vonjimaika ny ‘Adin'ny Bala Afomanga’ Rehefa Paska
Voadika ny 10 Mey 2016 3:05 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, Ελληνικά
Ireo tifitra balafomanga eny amboniin'ny tanànan'i Vrontados. Sary avy amin'i Aneta Silwia Zak, nahazoana alàlana taminy
Efa nahazatra ny mahitany saina voasariky ny tanana Grika ao Vrontados ao amin'ny Nosy Chios mandritra ny fetin'ny Paska Ortodoksa. Araka ny mahazatra, ny fomban-drazan'ny “Rouketopolemos” (“Adin'ny Bala Afomanga” amin'ny fiteny Grika) no anton'io, izay ahitàna ireo mpikambana avy amin'ireo fiangonana “mpifaninana”, Saint Mark sy Panaghia Erithiani, mitifitra bala afomanga an'arivony namboarin'izy ireo ihany mankany amin'ny andaniny sy ny ankilany rehefa misasakalina amin'io fialantsasatra io.
Saingy tamin'ity taona ity, lohateny goavana noho ny antony mifanohitra amin'izany i Vrontados. Nofoanana ny ady noho ireo mponina sasantsasany mandrahona fitoriana hanenjehana ireo mpanamboatra bala afomanga.
Io no fotoana voalohany nandritra ny zato taona tsy nisian'ny Paska mipoapoaka tao an-tanàna. Efa hatrany amin'ny fotoanandron'ny nibodoan'ny Ampira Ottoman an'i Gresy no nisy ny Rouketopolemos. Tamin'izany fotoana, natao tamin'ireo tafondro marovava tena izy feno vovo-banja ilay fomba fanao, miteraka fipoahana mirefotra mafy be, saingy noraràn'ireo tompon'andraikitra Ottoman ny fampiasàna azy ireny tamin'ny taona 1889, noho ny tahotra ny mety hitaran'ny fankalazàna ny fetin'ny Paska ho amin'ny fanoheran'ny olona ny fifehezan-dry zareo. Lazain'ny fombandrazana faharoa fa noheverina ho teraka ny Adin'ny Bala Afomanga, satria voarara ny fankalazan'ireo mponina ao amin'ny nosy ny fetin'ny Paska araka izay tiany, noho izany nanapaka hevitra izy ireo ny hanangana sarin'ady mba hitazonana ireo Ottoman ho eny lavidavitra eny.
Miomana mandritra ireo volana maro mialohan'ny sasakalin'ny Alahadin'ny Paska ny paroasin'i Saint Mark sy Panaghia Erithiani, rehefa hatao ny Adin'ny Bala afomanga. Mandray anjara amin'ny fanamboarana bala afomanga avokoa ny olona rehetra na kely na lehibe, tonga amin'ny faratampon'ny famaranana ireo fiomanana rehefa ao anatin'ny Fifadian-kanina (vanim-potoana mialoha ny Paska), miaraka amin'ireo zatovo mandray ny fitarihana eo ambany fibaikoan'ireo antipanahy, matetika ireo tantsambo efa nisotro ronono. Fatrana nitro manokana, solifara sy arintany no asesika ao anaty taratasy ahorongorona lavalava, izay afatotra amin'ny hazokely iray misy lahiny miraikitra eo an-tendrony ambany. Avy eo apetraka anaty làlany vita amin'ny hazo ireo bala afomanga, efa vonona harehitra sy hanome karazana afo maro mahafinaritra.
Rehefa sasakalina, maka ny toerany ireo vondrona mpifanandrina, ary mipoaka amin'izay ny ady rehefa mitarika lamesa momba ny Fitsanganan'ny tena amin'ny maty ireo pretra. Mipoaka manohitra ny lanitra maizina ireo bala afomanga, mamela tsipika manjelatra any aorian'izy ireo. Ny tanjona dia ny hahavoa ny tilikambon'ny fiangonan'ny mpifanandrina. Sarotra ny hilazàna izay mpandresy, marobe loatra ireo bala afomanga ary tsy mora ny manisa azy ny ampitso.
Raha ny marina, tsy ny handratra na iza na iza akory no hevitra. Rakofana takelaby sy makarakara vy tanteraka ireo trano fiangonana sy ireo trano avo manakaiky eo mandritra ilay fotoana. Raha tsy ankasitrahan'ireo mponina sasany ilay fomba, lasa loharanom-bola manandanja ho an'ny faritra kosa izany avy amin'ireo mpizahatany – misafidy ny handany ny fialantsasatry ny Paska ao Chios mba hanatrika ny ady fotsiny ireo olona manerana an'i Gresy sy ireo vahiny .
Ny taona 2015, namokatra fandihadiana fohy momba ilay fombandrazana ny tranonkalam-baovao Greek Reporter amin'ny teny Anglisy. Tao anatin'io, mitatitra mikasika ny fombandrazana amin'ilay adin'ny bala afomanga, i Dr. Stamatios Krimigis, safiotra Grika-Amerikana siantifika mpandinika ny eny an'habakabaka, teraka tao Vrontados, Chios:
Mampatsiahy ahy ny fahazazako io satria zatra nandray anjara tamin'ny adin'ny bala afomanga aho […] Zava-doza avokoa ny zavatra rehetra rehefa tsy miomana tsara ianao. Rehefa niomana ianao ary nandray tsara ireo fepetra mifanaraka amin'izany, mihena ny loza.
Lahatsary hafa avy amin'ny vovonana fandefasana lahatsary Nowness no manolotra topimaso iray nomena endrika manokana mikasika ilay fomban-drazana:
Fony mbola tsy fantatra tsara ny Adin'ny Afomanga, nandeha tsara ny zavatra rehetra. Saingy satria nitombo ny isan'ireo mpitsidika, noho izany mitombo koa ny isan'ireo afomanga sy ny mety hanimbàn'ireo bala mivezivezy an'ireo tranobe manodidina. Ny tsy fisian'ny fahaizana mitantana ilay fombandrazana sy ny fitomboan'ny vahoaka mijery fotsiny dia vao mainka mampananosarotra ny toedraharaha.
Tafakatra avo ny fifanenjanana tamin'ity taona ity, raha nanambara fa tsy afaka hikarakara ny ady malaza noho ny fandrahonana fitoriana ataon'ireo mponina ao an-tanàna, izay isan-taona tsy maintsy manarina ireo simba amin'ny tranony, ireo mpanamboatra bala afomanga ao an-tanànan'i Vrontados. Araka ny voalazan'i Greek Reporter hoe:
“Nanao izay afakay izahay mba hiarovana ny tranon'izy ireo sy nandresena lahatra azy ireo,” hoy ny filohan'ny vondrom-piarahamonina ao Vrontados, Markos Kosmas. “Saingy tsy nety niverina tamin'ny fanapahankeviny izy ireo. Fianakavian'ny mponina indrindra indrindra ireo mpandefa ny bala afomanga ary tsy te-ho sorona ho henjehan'ny mpitandro filaminana sy ny tribonaly ry zareo,” hoy izy nanampy.
‘asa nanomboka tamin'ny volana jona lasa teo ny rafitra iray araka ny lalàna mba hiarovana ireo fomban-drazana eo an-toerana, sahala amin'ny Rouketopolemos, ary manaraka akaiky ny fivoarany ireo mpanamboatra bala afomanga ao an-toerana sy ireo mpanohana azy. Kanefa tsy mbola nolanian'ny Parlemanta aloha izy io, hatreto.
Nanmboka ny tifitra balafomanga tao an-tanànan'i Vrontados. Sary avy amin'i Aneta Silwia Zak, nahazoana alàlana taminy
Ndeha isika hanantena fa hiverina ilay fomban-drazana any aoriana any, ary afaka hamaha ireo tsy fitoviankevitra misy amin'izy ireo amin'ny alalan'ny fifanakalozankevitra sy fandaminana matotra ireo ao an-toerana sy ireo manampahefana ao amin'ny governemanta.